Si loo codsado, baaraha mabda'a leh wuxuu u baahan doonaa inuu raaco talaabooyinkan:
Sharaxaadda mashruuca cilmi-baarista ee la soo jeediyey Codsadayaashu waa inay soo jeediyaan tijaabooyin ku salaysan shaqadooda ugu fiican. Soo jeedinta waa in la soo bandhigaa iyadoo aan la haynin 200 oo eray ama ka yar, oo ay ku xigto bayaan faahfaahsan oo ku saabsan qorshaha barnaamijka saddexda sano ah. Cilmi-baarista la soo jeediyay uma baahna inay soo bandhigto khariidad cusub oo cilmi-baaris ah, laakiin ma aha inay isku mid noqoto mashaariicda ay taageerayaan maalgeliyeyaasha kale. Soo jeedinta (sheekooyinka iyo tirooyinka, laakiin aan ahayn bibliyarotarn) waa in aanay ka badnayn lix bog oo la tiriyay, oo leh xaraf 12-dhibcood leh hal-dhabar mid ah.
Miisaaniyada la soo jeediyay. Codsaduhu waa inuu caddeeyaa sida isaga / iyadu ay u soo jeedinayaan in loo isticmaalo deeqda abaalmarinta McKnight Scholar Award ($ 225,000 ayaa lagu bixiyay si isku mid ah $ 75,000 sanadka 2020, 2021, iyo 2022). Waxyaabaha miisaaniyada la oggolyahay waxaa ka mid ah mushaaraadka iyo faa iidooyinka, qalabka, saadka, qarashka xoolaha, kharashaadka adeegyada farsamada, iwm. Codsiga waa inuu kujiraa miisaaniyadaha loo dajiyay sanad walbo, qaab sadarka / qaabka qadarka; Miisaaniyadaha sheekooyinka lama aqbali karo. Miisaaniyaadka looma isticmaali karo kharashyada dheeraadka ah ama kuwa aan tooska ahayn.
The Guddiga Dib-u-eegida ee McKnight Scholar wuxuu qiimeyn doonaa codsiyada oo uu xaddidi doonaa tiro xadidan oo codsadayaal ah oo la wareysto. Codsadayaasha waxaa la ogeysiin doonaa dhammaadka bisha Maarso wareysiyadaana waxaa loo qorsheeyay Khamiista, Abriil 23 magaalada New York.
Guddigu wuxuu u soo jeedinayaa musharixiinta Golaha Agaasimayaasha Sanduuqa Lacagta (Endowment Fund) go'aanka ugu dambeeya. Abaalmarino ayaa lagu dhawaaqi doonaa dhammaadka May 2020.
Tartankan, illaa lix Aqoonyahano McKnight ayaa loo dooran doonaa inay helaan seddex sano oo taageero ah, laga bilaabo Luulyo 1, 2020.
Murashaxiinta Abaalmarinta Aqoonyahannada McKnight waa inay lahaadaan:
Noqo mid ka shaqeeya Machadka Caafimaadka Howard Hughes ama saynisyahano ku dhex jira barnaamijka hordhaca ah ee Machadka Caafimaadka Qaranka
Aqoonyahan kasta oo kasta oo ah McKnight wuxuu heli doonaa $ 75,000 sanadkii sanadkii 2020, 2021, iyo 2022. Miisaaniyada waxaa loo adeegsan karaa si kasta oo u fududayn doonta horumarka barnaamijka cilmi baarista ee Aqoonyahannada, laakiin loogu talagalay kharashyada aan tooska ahayn.
Codsiga waxaa la rabaa Janaayo 1, 2020